Waa Maxay wax taaj oo kale duritaanka caaga? wax taaj oo kale duray caaga waa farsamo loo isticmaalay in ay qaabeeyaan caag ah oo ah qaab wax aad dooneysa in ay soo saaraan. Inta lagu jiro nidaamka is duritaanka wax taaj oo kale ah, polymers thermoplastic waxaa lagu mudaa saabka caaryada ah. Si arrintan loo sameeyo, kaabsal ee wax a waxaa sidaas oo kale ayaa kululeeyo ...Read more »
Waa Maxay The CNC Machining naxaas Qaybo? Qaybo machining naxaas leeyihiin dhowr faa'iidooyinka muhiimka ah marka la barbar dhigo machining qalabka kale. Naxaas jeestay qaybo iyo qaybaha yihiin waara, kharash-ool ah, iyo xataa abuuro seal a adag, waayo, rakiban. Intaa waxaa dheer, machining naxaas iyo qaybo ka jeestay leeyihiin sare ah ...Read more »
Progressive Stampings Progressive Gurdanka waa hab metalworking in koobi karo feedh, Cukuse, foorarsiga iyo dhowr siyaabo kale oo bedelayaan wax cayriin bir, oo ay weheliso hab quudinta automatic ah. nidaamka quudinta riixo strip ka mid ah biraha (sida unrolls ka gariiradda a) iyada oo dhan ...Read more »
caaryada caag ah
Waa maxay sababta iyo halka ay u isticmaalaan wasakhahaasi duro caag A caaryada duro caag ah waa aalad kasta oo gebi ahaan ama qayb ka mid ah waxyaabaha balaastigga ah (marka laga reebo laminates thermosetting warshadaha), iyo in, kaas caagga ah si xooga ku kordhinaya utility ee qalabka. qalab noocan oo kale ah u dhaxayn jidka oo dhan ka thos ...Read more »